ओमिक्रोनबाट संक्रमित भएको कसरी थाहा हुन्छ ?
काठमाडौँ । यतिबेला विश्वमा कोरोनाको नयाँ नयाँ लहर आएको छ । हरेक दिन नयाँ केसहरूको संख्या धेरै छिटो बढिरहेका छन् । हालको लहरका लागि जिम्मेवार भनिएको कोरोना भाइरसको भेरिएन्टको ओमिक्रोन रहेको छ ।
विज्ञहरू भन्छन् कि ओमिक्रोन संक्रमितहरू पहिलेका भेरिएन्टहरू, विशेष गरी डेल्टाबाट संक्रमणको समयमा देखाइएका गम्भीर रूपमा बिरामी छैनन् । तर ओमिक्रोनबाट हुने संक्रमण चाँडै फैलिन्छ । यस कारणले गर्दा, ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई सामाजिक दूरी पालना गर्न सल्लाह दिइएको छ ।
ओमिक्रोनबाट सङ्क्रमित भएका अधिकांश मानिसहरूलाई रुघाखोकी लागेको महसुस हुन्छ । घाँटी दुख्ने, नाक बग्ने र टाउको दुख्ने इत्यादी । कोरोनाको अघिल्लो संस्करणहरूबाट संक्रमित हुँदा, प्रायः मानिसहरूले गन्ध वा स्वाद गुमाउने वा खोकी र उच्च ज्वरो आउने गरेको हुन्छ । तर, आधिकारिक रूपमा यी तीन लक्षणलाई कोरोनाको लक्षण मानिन्छ ।
ओमिक्रोन कोरोना अघिल्लो खतरनाक भेरियन्ट डेल्टा भन्दा धेरै छिटो फैलिन्छ । तर, यसका बाबजुद पनि ओमिक्रोन त्यति गम्भीर नभएको र संक्रमित व्यक्ति अस्पतालमा भर्ना हुने सम्भावना कम रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन् । यसको मुख्य कारण यो हो कि मानिसहरूले खोप लगाएका छन् वा तिनीहरू पहिले संक्रमित भएका छन् जसले गर्दा उनीहरूको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भएको छ ।
ओमिक्रोन पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको थियो, दक्षिण अफ्रीकामा अहिले ओमिक्रोन चरम सीमामा पुगेको बताएको छ । त्यस्तै बेलायतमा पनि ओमिक्रोन उच्च विन्दुमा पुगेको बताइएको छ । विज्ञहरू ठूलो संख्यामा वृद्ध व्यक्तिहरू वा मानिसहरू जसको स्वास्थ्यमा कुनै न कुनै रूपमा सङ्क्रमण गर्न थाल्छ भने यो गाह्रो हुन सक्ने बताउछन् ।
ओमिक्रोन परीक्षण कसरी गरिन्छ ?
यो आरटी-पिसीआर परीक्षणबाट मात्र पुष्टि गर्न सकिन्छ जसमा र्यालको नमूना प्याथोलोजी प्रयोगशालामा पठाइन्छ । कोरोना संक्रमण छ कि छैन भनेर मात्र थाहा पाउनको लागि र्यापिड टेस्ट वा पिसिआर गर्न सकिन्छ । तर परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ आए पनि त्यो ओमिक्रोन हो कि डेल्टा हो वा अरु केहि हो भनेर थाहा हुन सक्दैन । ओमिक्रोनको पुष्टि गर्न जीनोम सिक्वेन्सिङ आवश्यक रहेको छ, जसका लागि चारदेखि पाँच दिन लाग्छ । परीक्षणको नतिजा कति चाँडो प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो त्यस क्षेत्रमा कतिवटा परीक्षण प्रयोगशालाहरूमा ओमिक्रोन परीक्षण प्रविधि उपलब्ध छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । उदाहरणका लागि, बेलायत जस्तो देशमा आधाभन्दा कम प्रयोगशालामा यो प्रविधि छ ।
ओमिक्रोनको भेरिएन्ट अन्य भन्दा कसरी फरक छ ?
भाइरसहरू निरन्तर रूपमा उत्परिवर्तित हुन्छन्, अर्थात् तिनीहरू लगातार रूप परिवर्तन गर्छन् । तिनीहरूको नयाँ संस्करणलाई नयाँ भेरिएन्ट भनिन्छ । यी मध्ये केही भेरिएन्टहरू बढी खतरनाक हुन सक्छन्, वा ती धेरै छिटो फैलिने हुन सक्छन् ।
वैज्ञानिकहरूको भाषामा यसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न अर्थात कति चिन्ताजनक छ भनेर छुट्याउने गर्दछन् । ओमिक्रोनलाई पनि वैज्ञानिकहरुले भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेका छन् ।
ओमिक्रोन भेरिएन्टको स्पाइक प्रोटिन भागमा भएको परिवर्तनले सुरुमा हालको खोपहरू ओमिक्रोनमा प्रभावहीन हुनसक्ने चिन्ता पैदा गरेको थियो । तर बेलायतको हेल्थ प्रोटेक्शन एजेन्सीले यसबारे आफ्नो अनुसन्धानमा बुस्टर भ्याक्सिनको थप डोज लिने हो भने ८८ प्रतिशत सुरक्षा बढ्छ अर्थात् अस्पताल पुग्ने सम्भावना नै रहँदैन भनेको छ । यो भ्याक्सिनको अघिल्लो भेरिएन्टसँग लड्ने क्षमताभन्दा थोरै मात्र बढी हो । बेलायतमा भएको अर्को अध्ययनले पत्ता लगायो कि ओमिक्रोनबाट संक्रमित व्यक्तिहरूमा डेल्टा भेरिएन्टको तुलनामा अस्पताल पुग्ने जोखिम झन्डै आधा हुन्छ ।